MDC-T Yoshora Kurudziro yeKutorwa kweMapurazi
Bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rinoti riri kukatyamadzwa uye kushushikana nemashoko emutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ekukurudzira kutorwa kwemapurazi mashoma asara achiri pasi pevarimi vechichena.
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, vanoti bato ravo rine mashoko anoti munyika masara vachena vachiri kurima vari pasi pemazana maviri, uye mapurazi mazhinji akatorwa pasi pechirongwa ichi akaenda mumaoko evashoma vari muZanu PF.
VaGutu vanoti bato ravo rinotsigira chose chirongwa chekugoverwa kwevhu kuvatema, asi kwete nenzira isina kurongeka, iyo rati iri kukanganisa hurongwa hwekurima munyika.
Izvi zvinotevera mashoko ari kuramba achidzokororwa naVaMugabe ekuti vachatora mapurazi evachena vasara vachine minda sezvo pachine vatema vakawanda vasina minda.
VaMugabe vari kuyambirawo vatema vakapiwa minda vanonzi vari kushanda pamwechete nevachena, vachiti vanogona kutorerwa mapurazi avo.
Mumwe ari kukurudzira kutorwa kweminda kubva kuvachena munyori muboka revechidiki mubato reZanu PF, VaKudzai Chipanga, avo vari kukurudzira VaMugabe kuti vape vechidiki minda yekurima.
Zvichitevera mashoko evaviri ava, mumwe murimi wechichena kwaRusape, VaRobert Smart, pamwe nemwe vatema vakagariswa patsva vanosanganisira vaimbove varwi verusununguko vakatorerwa nechisimba mapurazi avo svondo rapera.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti chinonyanyorwadza ndechekuti minda iri kutorwa munguva yekunge varidzi veminda iyi vave kutanga kukohwa, vorasikirwa nezvirimwa zvavo pamwe nemari.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanotiwo VaMugabe vave kuimba rwiyo rweminda urwu nekuti nyika yatarisana nesarudzo.
VaMaguwu vanoti mutungamiri weZanu PF uyu haachina chimwe chekuvimbisa vanhu kana kuvakwezva kuti vavhotere bato ravo, sezvo upfumi hwenyika hwaparara, vachiti asi izvi zvinodzorera nyika kumashure.
Asi vanoti izvi hazvina zvikuru zvazvichashandura sezvo vanhu vave kuziva kuti vari kuvimbiswa nhava izere mhepo, nekuti vari kuona vamwe vakambopiwa minda iyi vave kubviswa zvakare nechisimba.